Semalt बाट पाँच SEM रणनीतिहरूको प्रयोग गरेर स्ट्रिंगर ब्रान्ड अवेयरनेस निर्माण गर्दै
व्यवसाय मालिकहरूले SEM वा SEO रणनीतिहरू लचिलो छैनन् र तपाइँलाई ब्रान्ड सचेतना बढाउन छैन भनेर बुझ्नु पर्छ। कारण यो छ कि खोज एल्गोरिदमहरू सधैं परिवर्तन हुन्छन्। यी परिवर्तनहरू हुने क्रममा व्यवसायले प्रत्येक अवसरको उपयोग गर्नुपर्दछ। यो एक मात्र तरीका हो कम्पनीको आरओआई शुट हुन्छ। निम्नलिखित Segt ग्राहक सफलता प्रबन्धक Igor Gamanenko, द्वारा वर्णन गरीएको छ-चरण प्रक्रिया छ जुन एकले स्थानीय एसईओ सेवाहरू सुधार गर्न सक्दछ।
१. shopping 54% अमेरिकीले सार्वजनिक खरिद गरेका फोन पुस्तकहरू प्रयोग गरेर इन्टरनेट ब्राउज गर्न र सामान वा सेवाहरूको लागि स्थानीय खोजी कार्य गर्न थालेका छन्। यसको मतलब यो हो कि स्थानीय ग्राहकहरु ब्यापारको मेरुदण्ड बनाउँछन् र मालिकहरु उनीहरुका रुचिहरु पूरा गर्न कोशिस गर्नु पर्छ यदि उनीहरु उद्योग लाई बाँच्न छन। यसको एक उदाहरण युटाबाट पार्सन बेहले र लाटीमर कानून फर्महरू हुन् जसले उनीहरूको वेभसाइट मार्फत उनीहरूलाई असर गर्ने नयाँ समाचार वा स्थानीय कानूनको बारेमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई अपडेट गर्दछन्। तिनीहरू SEM मा निर्भर छन् उनीहरूको साइटहरूमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न, र उनीहरूको साइटमा नफा लाभ।
२. स्थानीयकृत साइटहरूबाट आउने लिंकहरू र उद्धरणहरूले व्यवसायको ब्राण्ड जागरूकता अभियानमा बहुमूल्य स्रोतको रूपमा थप्दछ। तिनीहरू कार्बनिक उपस्थिति साथै स्थानीय एसईओबाट रेफरल ट्राफिक सुधार गर्दछ। यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि लि and्कहरू र उद्धरणहरू गुगलको खोज एल्गोरिथ्मको लागि शीर्ष-श्रेणीकरण संकेतहरू हुन्। रेफरलहरूले आत्मविश्वासको मतको रूपमा कार्य गर्दछ जसले कम्पनीलाई प्राप्त हुने विश्वसनीयताबाट उत्पन्न हुने एसईओमा बढावा दिन्छ।
Your. तपाइँको पीपीसी प्रयासहरूको शीर्षमा रहनुहोस्। व्यवसाय मालिकहरू फेला पार्न यो सामान्य छ जुन सोच्दछन् कि उनीहरू निर्धक्क भई पीपीसी अभियान सिर्जना गर्न सक्दछन् र तुरुन्त परिणामको आशा गर्दछन्। गुगल ऐडवर्ड्स सब भन्दा ठूलो स्थानीय विज्ञापन बजार हो, र कुनै पनि ROI हेर्नका लागि तिनीहरू क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्छ। भुक्तान-प्रति-क्लिक अभियान चलाउन अनुभव र समझ आवश्यक छ यदि एकले आफ्नो ब्राण्ड सही रूपमा प्रदर्शन गरेको आशा गर्दछ भने। इन-हाउस मार्केटिंगले पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछ जस्तो लाग्न सक्छ, तर व्यवसाय मालिकहरूले उनीहरूलाई पीपीसी गर्नको लागि पेशेवरहरू राख्नु पर्छ किनकि यो लामो समयको लागि उत्तम विकल्प हो।
Pictures. चित्रहरू राम्रो छन्, तर चलचित्रहरू अझ राम्रो छन्। कम्पनीको साथ काम गर्ने मानिसबाट प्रशंसापत्र प्रयोग गरी ब्रान्डलाई मान्यता दिन सजिलो छ, वा इन्फोग्राफिक्सले कम्पनीको अर्थ के हो भनेर चित्रण गर्दछ। जे होस्, भिडियोहरू यसलाई अधिक कुशलतासाथ सम्पन्न गर्न चाहन्छन्। तैपनि, एक भिडियो मा एक टेकवे त्यस्तो एक नुस्खा टिप, नि: शुल्क वित्तीय सल्लाह, वा साइट मा छूट कूपन कसरी प्राप्त गर्न को लागी एक सल्लाह समावेश गर्न याद गर्नु पर्छ। अन्यथा, भिडियोले अपेक्षित प्रभाव पार्ने छैन। गुगलले यूट्यूब च्यानलमा धेरै लगानी गरेको छ, र यस्तो हुन्छ कि यो स्थानीय खोज बजारको एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिन खोज्ने फर्महरूको लागि पर्याप्त लोकप्रिय ठाउँ हो।
Market. हजारौंलाई बजार। वर्तमानमा, त्यहाँ एक अनुमानित million 86 मिलियन हजारौं वर्ष छ, यसको मतलब यो एक लाभदायक कोनाका हो। यदि ब्रान्डले उनीहरूलाई उनीहरूको मनपर्ने मोबाइल अनुप्रयोगहरू मार्फत पुर्‍याउँदैन भने, त्यसो भए त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ कि यो समूहमा नपुगेको छ। २०१ By सम्ममा, स्थानीय रूपमा लक्षित मोबाइल विज्ञापनहरूले विज्ञापनमा कुल खर्चको आधा बढी ओगट्छन्।
उत्तम रणनीति भनेको स्थानीय एसईओ सेवाहरूमा निर्भर हुनु हो र यस पोस्टमा उल्लेखित पाँच चरणहरू त्यो पूरा गर्न मद्दत गर्दछ, र व्यापारको आरओआई सुधार गर्दछ।